AnimeLog abụghị Ọnwụ nke Crunchyroll Ma ọ bụ Funimation - Ndị Ọzọ
AnimeLog B NOTGH The Ọnwụ nke Crunchyroll Ma ọ bụ Funimation, Nke ahụ abụghị ihe ọ bụla Ma Pịabait
AnimeLog bụ 'nnọchi' maka KissAnime mgbe ọ nwụsịrị na nso nso a. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ nke ahụ bụ ihe ụfọdụ ndị na-akpọ ya.
Na enweghị ihe ijuanya - clickbait YouTubers na ndị nkwusa na-ekwu na ọ bụ 'ọnwụ nke Crunchyroll na Funimation'.
Ọ na-adịghị enweta ọzọ clickbait karịa na , ghara ikwu banyere ịkwa emo na nke na-adịghị emetụ n'ahụ.
Fọdụ ndị egwuregwu anime yiri ka ha kwenyere ya n'agbanyeghị na ọ bụ karịa ikwubiga okwu ókè.
Nah f * ck ya, ha na-ekwubiga okwu ókè dịka….
Ozi ọma na onye ọ bụla! Anime ga - amalite inwe onwe ya na youtube n'okpuru channel Animelog, yabụ enweghị ụgwọ crunchyroll iji lelee pic.twitter.com/r8neDoP46m
- & # x1f351; (@IGIHE) Ọnwa Nke Asatọ 19, 2020
Animelog weeb cheerleaders bụ hilarious. Ha gara n'ihu banyere etu o si bụrụ na njedebe nke Funimation na Crunchyroll, mgbe ọba akwụkwọ dị na ya ga-abụ egwuregwu anime dịka Doraemon na Tezuka. Oge ndị a bụ jam m, mana ọ bụghị nke ha.
- massoluk - Ndụ Ndụ Ndụ. (@onyedikachi_) Ọnwa Nke Asatọ 17, 2020
Obi dị m ụtọ na Crunchyroll na Funimation ga-ewepụ azụmaahịa n'ihi AnimeLog. https://t.co/h2eewR0NCM
- Zaelkrie & # x1f1ff; & # x1f1e6; (@egha_egha) Ọnwa Nke Asatọ 17, 2020
Ha na-eche ụlọ ọrụ anime na-aga site na monetization YouTube ga-egbu Funimation na Crunchyroll. pic.twitter.com/P38KrmKvof
- Rootsofjustice (@nkezieegwu) Ọnwa Nke Asatọ 18, 2020
Dị ka ị pụrụ ịhụ na Tweets ndị a, ụfọdụ Fans ma:
KWEERE n'ezie AnimeLog ga-egbu Funimation na Crunchyroll.
Nke pụtakwara obere anime gụgharia ọrụ.
Ma ụfọdụ kwenyere na AnimeLog bụ “ọdịnihu”.
Ma ọ bụ ezigbo nnọchi maka KissAnime.
Nke a bụ ụdị ihe m ga-achị ọchị.
Enwetara m ya, Fans bụ DESPERATE maka anime gụgharia ka mma. Ha na-achọsi ike maka ọrụ na-enye ha ihe ha chọrọ.
Mana… AnimeLog abughi knight gi na shining armor m na atu ujo.
Ọ bụghị naanị.
AnimeLog adịghị mma iji 'gbue' ihe ọ bụla
usoro kachasị Anime nke oge niile
AnimeLog bụ ihe 30 Anime nka na-agbakọta iji mee ka sh * mee. Ọ bụ ihe dị ka oge, ekwuru m mgbe niile na imekọ ihe ọnụ bụ ụzọ kachasị mma.
Slọ nka dị ka:
Ihe nkiri Nippon
Na ọtụtụ ndị ọzọ, ha na-ezube ịnye aha anime 3000 maka n'efu na ọwa YouTube ha.
Ha bu n’obi ime nke a n’afọ 2022. Ya mere, enwekwala obi anụrị.
ọ bụrụ na ha emezu ebumnuche ha site na 2022:
Ha ga enweta ọdịnaya karịa ọrụ nkwanye ụgwọ ọ bụla akwụrụ ụgwọ
Nke a kwesịrị ịpụta ìhè nye onye ọ bụla, ọ bụ ihe kpatara ndị mmadụ ji enwe oke ọ thinkingụ na-eche na ọ ga-ewepu ọrụ nkwanye ụgwọ akwụ ụgwọ.
Crunchyroll nwere ihe karịrị 1000 + aha anime na USA. ná mba ndị ọzọ ọ bụ ebe ọ bụla si:
Dabere na obodo ma ọ bụ akụkụ ụwa anyị na-ekwu maka ya.
Nke a bụ eziokwu maka Funimation kwa mana ọnụọgụ ga-adị iche ebe ha nwere Mpekarị Anime n’elu ikpo okwu ha.
Na nke a, AnimeLog ga-achịkwa ma ọ ga-emebi ụfọdụ.
Ma nke ahụ abụghị eziokwu
Onye ọ bụla nke na-eche AnimeLog bụ nnukwu onye nzọpụta nke Anime na-echefu otu ihe: ego.
Kedụ ka a ga-esi kwụọ ụgwọ n'efu?
Kedu ka ọ ga-esi adigide?
Kedu ka ọ ga - esi bụrụ echiche ego?
Kedu otu ụlọ ọrụ anime ga-esi enweta uru?
Mgbasa ozi YouTube bụ igbu onwe kpam kpam. Studlọ ihe nkiri egwuregwu ndị ahụ niile na-ekerịta obere achịcha ahụ n’etiti onwe ha bụ nzuzu.
Ọ bụrụ na ha kpebie ịkpata ya n'ụzọ dị otu a, n'oge na-adịghị anya, ha ga-amụta na ọ bụ azụmaahịa adịghị mma. Ọ bụghị n'ihi na mgbasa ozi anaghị akpata ego, mana n'ihi ọ na-adabaghị na usoro azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Toei Animation na onye ọ bụla ọzọ, nnukwu ma ọ bụ obere, nwere ike inye nnukwu anime 'n'efu' ka ha chọrọ. Ha nwere ike jupụta ọwa YouTube ruo mgbe ọ ga - ewepụ anime ma ọ bụrụ na ha họrọ.
Na njedebe nke ụbọchị - ego ekwesịrị ịme ya, ma ọ bụ na ọ nweghị ohere ịhapụ ụlọ ọrụ gụgharia anime.
Na igwu egwu n'ime ala nke usoro YouTube abụghị echiche kachasị mma.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anime wuru onwe ha WEBSITE ọnụ ma were usoro a ọ ga-amasị m karị. Ha ga-enwe njikwa na itinyekwu ego n’ụzọ ahụ.
Nke ahụ bụ karịa itinye ego ogologo oge, m na-ahụkwa ihe 'YouTube' ha na-eme dị ka obere ego.
Ha ka mma ime atụmatụ karịa maka ọdịmma ha.
ike bụ naanị ihe dị mkpa n’ụwa a
Nanị ụzọ AnimeLog nwere ike isi merụọ CR / Funi:
Jide ikikere ma jụ ire ha.
Nye anime n'efu maka afọ 5 kwụ ọtọ.
Debe ihe niile n'ime Japan.
Bugharịa na YouTube gaa na ntanetị nke ụlọ ha.
Ma nke bụ eziokwu bụ Toei Animation na ndị ọzọ na 29 Anime nka e wughi otu ahu.
Ha enweghị ọkwa ego na akụnụba ahụ iji mee ka ha kwụsị ịdọrọ ya. Nke a bụ usoro “Amazon” mana Amazon wepụrụ ya n’ihi na o nwere ndị nwere ego.
Anlọ ọrụ anime ndị Japan enweghị nkwado dịka nke ahụ. Ya mere, ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị nrọ.
Ọ bụ ọmarịcha nrọ, mana ndị na-egwu anime kwesịrị ịkwụsị ma chee echiche banyere nzuzu nke ihe ha na-ewere.
Enwere m mmasị n'echiche nke AnimeLog mana ọ bụ ụzọ na-ezighi ezi ọ gwụla ma ha nwere ihe na-echere ụzọ. N'ihi na ọ bụghị ego bara uru ogologo oge.
Ka anyi mechie nke a na otu nke Tweets di nkpa:
Emeela ka AnimeLog, nke Japan, nke US kwadoro, Youtube ọwa na-eme atụmatụ ịnye anime n'efu.
Fọdụ na-ekwu na ọ bụ 'Ọnwụ nke Crunchyroll / Funimation'.
Ọ dịghị ma ọlị. https://t.co/4OK6EBYeOe
- Canipa | CHINEKE I NA-EKPERE OFUO NWUNYERE OKWU & # x1f607; & # x1f47f; (@Onyinyeigbo) Ọnwa Nke Asatọ 17, 2020
Ugbu a, ọ bụ naanị na Japan, nwere ihe ndị dị ka Future Boy Conan na ụyọkọ ụmụaka anime. Mana ha na-eme atụmatụ itinye ndepụta okwu na ụfọdụ nhapụta ha.
Mana nke a bụ ihe: Youtube ad revenue agaghị akwụ ụgwọ maka ego furu efu na ikikere.
Ọbụna nnukwu ọwa Youtube ga - esiri ike ime dị ka Crunchyroll ma ọ bụ Funimation site na ntinye ego. Mgbe otutu ibu na-agbasa ozi a na nseta ihuenyo nke Otu Piece, Dragon Ball Super, na My Hero Academia, enweghi ohere ndị ahụ ga-adị na ya.
Onyinye ego buru ibu maka oge anime taa bu ugwo ikike nke ndi ofesi site na oru ndi ghari. 'Nrọ nke ụlọ ọrụ anime na-ezukọ ma na-ahapụ ihe anime ha niile n'efu na Youtube' bụ nrọ na-egbu opekata mpe ọkara ego niile maka ụlọ ọrụ niile.
Ugbu a, ụlọ ọrụ Anime America bụ nke Sony, AT & T, Netflix na-achịkwa. Tojụ ikikere ụlọ ọrụ ndị a na ịhapụ ya n'onwe gị site na Youtube bụ nhọrọ dị oke egwu maka ihe ọ bụla ọzọ karịa ONA dị ọnụ ala ma ọ bụ obere ihe nkiri.
kedu ihe kacha ukwuu anime niile
Nke a abughi obere ulo oru. Ọ bụrụ na ịmechara mmalite, ọ ga-ejupụta niche. Dika otu RetroCrush si weputa anime anime. O yikarịrị ka AnimeLog ga-eme otu ihe ahụ na ndị ochie na-enweghị ikike.
Mana ọ gaghị 'weghara ụlọ ọrụ' dịka ụfọdụ azọrọ / olileanya.
Akụkọ akụkọ: Twitter.
Nsogbu nke Anime Piracy na Otú O Si Dị Mkpa
Toei Animation si 'Efu' Anime Gụgharia Ọrụ agaghị ewepụ Piracy
Akwụkwọ Kasị Ukwuu Oge Niile Love Ga-ahụ N’anya Site na Nanatsu No Taizai
17 Baraggan Louisenbairn Quotes lecha ọcha Fans gaghị echefu
5 Naruto Uzumaki Nkuzi Banyere Otu esi edozi nsogbu nke ndụ
Ebumnuche 7 Dị Mkpa Mere M Ji enwe Ọ Enjoyụ Ikiri Anime
Ihe Omume Ọhụrụ: Companylọ ọrụ Mecha Na-erute Ihe karịrị 100,000 + Fans kwa ọnwa!
9 Of The Anime Ihe ngosi Kachasị Mma Dị Ka “Pokemon” Worth idtụle
Ndị a bụ ndị kasị ewu ewu Anime & Manga Na Russia (Dị ka Google)
20 Mma agha Art Online na-ejuputa na mgbu, mwute na mmụọ nsọ
7 Anime Characters ndị dị nnọọ ka #JoeBiden
11+ Of The Best American Anime Characters Worthinging Banyere
ezigbo anime na-ekiri na bekee
ihe ngosi anime kacha mma na oge niile
bekee kpọrọ aha anime site na genre